I-Raw YK-11 Powder (431579-34-9) Abakhiqizi - I-Phcoker Chemical
I-Raw YK-11 powder (431579-34-9)
Mashi 6, 2020
I-YK-11 powder ingeqembu le-modulators ekhethiwe ye-androgen receptor (YK11 powder). Ngokuyisisekelo, okwenziwa yiYK11 ukukhetha ……
I-Raw YK-11 powder (431579-34-9) ividiyo
I-Raw YK-11 powder (431579-34-9) Incazelo
I-YK11, eyaziwa nangokuthi iMyostine, ibhekwa njengenye ye-YK11 powder enamandla emakethe. Kuyinto yokwenziwa ekhethiweyo ye-androgen receptor modulator yokwenziwa. Umuthi unemisebenzi ye-anabolic e-vitro ku-C2C12 myoblasts futhi ukhombisa i-potency enkulu kune-dihydrotestosterone (DHT) kulokhu. I-YK11 futhi iyi-Myostatin inhibitor. bangakusiza ekutholeni imisipha futhi ulahlekelwe ngamafutha.
I-Raw YK-11 powder (431579-34-9) Siziqu
Igama Product I-Raw YK-11 powder
Igama leKhemikhali YK11, (17a, 20E) -17,20 - [(1-Methoxyethylidene) bis (oxy)] - 3-oxo-19-norpregna- 4,20-diene-21-carboxylic Acid Methyl Ester; YK11 ((17α, 20E) -17,20 - [(1-methoxyethylidene) bis- (oxy)] - 3-oxo-; i-DNA (i-Terrabacter strain YK11 16S i-rRNA isici segciwane); GenBank AB070463
I-Drug Class I-YK11 powder
CAS Inombolo 431579-34-9
I-molecular Fi-ormula C25H34O6
I-molecular Weziyisishiyagalombili 430.53386
IMisa ye-Monoisotopic I-430.236 g / mol
Ukuxuba Pi-oint I-190-200 ° C
I-Half Half-Life Amahora we-6-10, kuye ngokuthi umuntu ngamunye
Color Ukuqina okumhlophe
Sukufaneleka I-Propylene Glycol, iDMSO, i-Ethanol
Sukuhlushwa Tukushisa Ukushisa kwamakamelo
I-Raw YK-11 powder Aukuphikisana I-Androgen Receptor Modulator ekhethiwe, i-Myostatin Inhibitor
I-Raw Raw Raw YK-11 (431579-34-9) Incazelo
Abasebenzisi abaningi bacabanga ukuthi i-YK11 iyisihluthulelo sokuvula amandla womzimba ngokugcwele futhi uzuze izinzuzo zemisipha esheshayo ngemiphumela emibi embalwa. Iphinde yathi i-YK11 inamandla okunciphisa umsebenzi we-myostatin, iyenze ibe yi-myostatin inhibitor. I-YK-11 ngokuqinisekile ingenye enamandla kakhulu laphaya. Awungeke uqhathanise ngempela i-YK ne-LGD-4033 noma eminye imikhiqizo ngenxa yokuthi iqine kangakanani.
Kodwa-ke, noma i-YK-11 i-powder eluhlaza iqinile ngokumangalisayo khumbula ukuthi kuye kwenziwa izifundo ezimbalwa kuphela ngaleli khompiyutha. Lesi isizathu esiyinhloko iningi labantu kubonakala sengathi lihamba nabanye abanjengo-Ostamuscle, RAD-140 noma i-GW-501516.
I-YK11 izitholela inzalo kubakhi bomzimba ngenxa yekhono layo lokwakha ngokushesha izicubu ngemiphumela emincane.
Esinye isifundo seselula sikhombisa ukuthi i-YK11 ikhulisa ubuningi besisipha. Abacwaningi bathola ukuthi kwandisa amaprotheni follistatin (a myostatin inhibitor).
I-YK11 ingathuthukisa impilo ye-bone. Esicwaningweni samaseli amathambo, i-YK11 yakhula amazinga we-protini yokwakha amathambo.
Abanye abakhi bomzimba abaye bahlola i-YK11 babika ukuzuza kwemisipha emihle nokulahlekelwa kwamafutha nemiphumela emibi kakhulu. Kodwa-ke, okwamanje ayikho isilwane noma izifundo zabantu ze-YK11 nokuphepha kwayo akucacile.
I-YK-11 powder emifushane (431579-34-9) Indlela Yokusebenza
I-YK11 inesakhiwo samakhemikhali esifanayo ku-DHT futhi lokhu kuboniswa ngendlela ebophezela ngayo i-androgen receptors. Umzimba ukhiqiza i-DHT ngokwemvelo ngenhloso yokukhuthaza impilo ye-prostate, ukukhula kwezinwele, nokuthuthukiswa okufanele ukukhulelwa.
Abacwaningi benza ucwaningo lweseli ukuthola ukuthi lisebenza kanjani ukwakha imisipha. Imiphumela ibonisa ukuthi ihlose ukwandisa ama-follistatin amazinga. I-Follistatin enye eyenzeka ngamaprotheni emzimbeni womuntu osiza ukugcina i-myostatin isheke. I-Myostatin iyi-hormone eyomsebenzi wayo ukuvimbela ukukhula kwemisipha engavamile.
Kuze kube manje, kuphela i-YK11 powder eluhlaza enekhono lokuvimbela i-myostatin.
Ubufakazi obengeziwe bukhombisa ukuthi i-YK11 ingakhuthaza nokukhula kwethambo ngokuphazamisa isango elisebenza njengeDHT.
Izinzuzo of Raw YK11 powder (431579-34-9)
Ukwandisa Ubukhulu Bamasipha
I-YK11 inekhono elihle lokukhuthaza ukukhula kwemisipha.
Lokhu kungenxa yokuthi ngokwemvelo kukhulisa ama-follistatin amazinga okwenza ngcono amandla omzimba wakho wokukhiqiza amangqamuzana omzimba. I-Follistatin ibuye ikwazi ukucindezela i-myostatin, ngaleyondlela ikuvula kuze kube khona ukukhula okungapheli kwemisipha. Kodwa uma imiphumela ye-follistatin ivinjelwa nganoma iyiphi indlela, ukuvimbela kwe-myostatin akunakwenzeka, okwenza ukuthi i-YK11 ingasebenzi.
Akufanele uzwakale njengerekhodi ephukile kodwa azikho izifundo zesintu noma zezilwane ukubuyisela idatha kule nkampani.
Konke esinakho ubufakazi be-anecdotal ngokusekelwe ekubuyekezweni komzimba kumasimu enethiwekhi. Lokho abasitshelayo ukuthi bakwazi ukubhekana nokunciphisa amanoni okuphawulekayo futhi ama-15 lbs ayesezingeni elimnandi le-muscle elizuzayo ngesikhathi esincane.
◆ Kuqinisa Amathambo
Ama-hormone ocansi abalulekile ekugcineni amathambo aqinile futhi enempilo. Ubufakazi obukhona bukhombisa ukuthi i-YK11 powder eluhlaza ingakhuphula amandla amathambo ngokuzibophezela kuma-androgen receptors.
I-YK11 ingakwandisa inani le-PKB esebenzayo (i-protein kinase B) ekhona emangqamuzaneni omzimba okusiza ukukhula kwamaseli esithambo.
Asingakhohlwa ukuthi ufuna ukuba nemisipha enamandla, enempilo namathambo ukugwema ukuqhuma. Kungase kusize nalokhu futhi ngoba kuyasebenza kakhulu ekwakheni imisipha, ukusekela impilo ye-bone nokunciphisa imiphumela ye-bone fragility.
I-Raw YK-11 ephakanyisiwe (431579-34-9) Isilinganiso
Abakhi bomzimba abasebenzise i-YK11 powder eluhlaza bathi ukuyithatha ngemithamo ka-10 kuye ku-15 mg ngosuku kusebenza kubo. Abanye babike imiphumela emihle ku-5 mg ngosuku. Iningi labasebenzisi liyijikeleza amasonto amane kuya kwayi-4.
Imiphumela emibi ye-Raw YK-11 powder (431579-34-9)
▲ Kuze kube manje, izifundo zeselula kuphela zenziwe ku-YK11.
Ayikho ubufakazi bokutholwa komzimba noma ngisho nezifundo zezilwane ukubuyisela noma yiziphi izimangalo ezenziwa mayelana nomuthi.
Lokhu kuzokukwenza ucabange kabili ngokucwaninga ngalesi sakhi. Mhlawumbe kufanele uhlole izinhlobo ezihlukahlukene ezifana ne-Ostarine neLigandrol. Unolwazi oluningi nolucwaningo olutholakalayo.
Kuthiwa i-YK11 ingaba yingozi kulokhu. Ukukhuluma nge-hypothetically, kungathinta izinwele zokukhula, intambo yezwi, i-prostate impilo nezinye izitho ezibalulekile emzimbeni.
I-Ibutamoren Mesylate (MK677) powder
I-Raw Compound 7P powder (1890208-58-8)